Xal U Helista Martida Ugu Yaabka Badan
Features » Martida Turxaan bixinta
Si buuxda u hubi martidaada kahor intaadan u oggolaan marin u helka guryahaaga caawimaadda Zeevou.
Warbixinnada guryaha dabaqyada ah ee daba socda xafladihii laga goostay Airbnb ayaa ku badan warbaahinta guud. Maxay u helayaan fiiro gaar ah oo warbaahin ah? Sababtoo ah nasiib darro iyagu maaha kuwo aan caadi ahayn. Dhinacyada ay tuuraan martida muddada gaaban waxay ku kici karaan martigelinta kumanaan kun, kiisaska badankoodna milkiilayaasha martigelinta ayaa looga tagayaa wax yar oo ka mid ah dib-u-celinta waxayna u baahan yihiin inay ku soo rogaan biilka oo dhan - dayactirka, dakhliga lumay, dib-u-dejinta boosaska dambe iyo liistada ayaa socota. iyo on
Marka laga soo tago xafladaha noocan oo kale ah, waxyeelada ay geystaan ​​martida oo joogaya toddobaadyo ama bilo ayaa aad uga sii badnaan kara deebaajiga ay dhigayaan martida loo yahay. Had iyo jeer waa markan oo keliya in martigaliyayaashu ay bilaabaan inay ka walwalaan cidda martidoodu runti ahayd iyo sida ay uga bixi karaan dib u soo celinta kharashka martidooda. Markaa, badanaa waa goor dambe.
Sidee ayay Caawinta Martida ee Zeevou u caawin kartaa?
Hawl-wadeennada waxay u baahan yihiin inay si buuxda ugu firfircoon yihiin baaritaanka iyo oggolaanshaha martidooda ka hor inta aysan furayaasha furayn. Ka sokow hubinta taas lacagta waxaa lagu soo uruuriyaa habab yareynaya halista dib u soo celinta, martigaliyayaal badan ayaa sidoo kale u baahan deebaajiga amniga in la bixiyo kahor imaanshaha. Intaas waxaa sii dheer, martidu sidoo kale waxay u baahan karaan martida inay bixiyaan faahfaahinta xiriirkooda, iyo dukumiintiyada aqoonsiga. In kasta oo ay caado ka tahay hudheelka hudheelka in laga soo ururiyo macluumaadkan martida marka ay soo galayaan, martida badan waxay isu furaan khataro aan loo baahnayn iyaga oo taas ku guuldaraysta. Intaas waxaa sii dheer, martida badanaa looma baahna inay saxeexaan hal xaashi (ama ay keenaan wixii u dhigma ee dhijitaalka ah) ka hor intaan loo dhiibin furayaasha guriga fasaxa.
Kuwa martida loo yahay ee isku dayay inay hubiyaan in sanduuqyada oo dhan la calaamadeeyay ka hor imaanshahooda, way cadaandoontaa inay aad u adag tahay in lala socdo wax walba, gaar ahaan miisaanka. Tani waxay adkeyneysaa in la hubiyo in furayaasha mar uun la dhiibo mar haddii dhammaan maaliyadaha iyo turxaan bixinta martida la daryeelay.
Kooxdayada Zeevou waxay soo saareen dhowr dariiqo oo ka caawiya martida inay ilaashadaan hantidooda iyo inay yareeyaan halista kharashaadka maaliyadeed sababa iyaga oo aqbalaya ballansashada. In kasta oo laga yaabo inaad si aad ah uga shaqeysay helitaanka ballansashada markii ugu horreysay oo aad xiiseyneyso inaad lacag ku bixiso koontadaada bangiga, waxaa lagama maarmaan ah inaad hubiso inaadan wax jawaab celin ah ka heli doonin khadka.
Marka, marka laga reebo kaliya aruurinta lacagaha iyada oo loo marayo 3-D Links Secure, Zeevou's 5-Habka Xaqiijinta Buugga sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad kala baarto martidaada. Is dhexgalka Zeevou iyo Saxeexan waxay kuu ogolaaneysaa inaadan helin oo keliya shuruudahaaga iyo shuruudahaaga ay saxeexaan martida, laakiin sidoo kale inaad soo ururiso inta qaybood ee aqoonsi ah sida aad rabto. Tusaale ahaan, ka sokow nuqul ka mid ah baasaboorka, waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad soo qaadato caddayn cinwaan ah si aad iskaga gudubto cinwaanka ay u mari jireen shuruudaha xaqiijinta 3-D ee lacagta la soo ururiyay ama dhigaalka amniga ee horay loogu oggolaaday Zeevou.
Zeevou waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto horumarka tallaabo kasta oo ka mid ah hannaanka xaqiijinta ballansashada, oo ay ku jiraan xaqiijinta martida. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto mar haddii shuruudaha iyo shuruudaha loo diro si loo saxiixo, iyo marka martidu dhammeyso baqshadda la saxiixi karo. Ha walwalin, tilmaamaha is-is-hubinta ee aan wali la soo dirin, xitaa haddii ay ku soo celiyaan baqshadda sawir ka mid ah Cocker Spaniel ay jecel yihiin oo lagu soo rogay meeshii Aqoonsiga.
Martida waxaa kaliya oo lasiin doonaa inay galaan guri marka aad hubiso dhamaan dukumiintiyada ay soo gudbiyeen, oo aad xaqiijiso muuqaalkooda. Si loo hubiyo khibrad marti waa sida loogu riyaaqsan yahay sida ugu macquulsan, Zeevou wuu xasuusan doonaa macluumaadkan, marka xigtana buugaagta martida, looma baahna inay maraan nidaamka turxaan bixinta martida mar labaad.
Haddii martidu waxyeello u geysato hantidaada ama ay jabiso sharciyada gurigaaga, waad caddayn kartaa cinwaankooda oo waxaad ku dari kartaa qoraal xusuusinaya inaadan rabin martigelinta martida mar kale haddii ay isku dayaan inay ballansadaan mid kale oo ka mid ah guryahaaga.